IHopin: Indawo ebonakalayo yokushayela ukuzibandakanya emicimbini yakho eku-inthanethi | Martech Zone
Ngenkathi ukukhiya phansi kwenza imicimbi ibonakale, kuphinde kwasheshisa ukwamukelwa kwemicimbi eku-inthanethi. Lokhu kubalulekile ukuthi izinkampani zikubone. Ngenkathi imicimbi engaphakathi kwabantu izobuya njengesiteshi esibucayi sokuthengisa nokumaketha ezinkampanini, futhi kungenzeka ukuthi imicimbi ebonakalayo izoqhubeka nokwamukeleka futhi ibe isiteshi esiyinhloko futhi.
Ngenkathi amapulatifomu womhlangano abonakalayo enikela ngethuluzi elingasetshenziswa ukuze libe nomhlangano owodwa noma ama-webinar, lawo mathuluzi ayasilela ekunikezeni ipulatifomu ephelele ehlanganisa zonke izici ze ingqungquthela. Umngani wami omuhle UJack Klemeyer wabelane ngethuluzi inkampani yakhe yabaqeqeshi ebelilisebenzisa ukushintsha ingqungquthela yaminyaka yonke yomuntu uqobo iye kulowo obonakalayo… iHopin.
IHopin: Indawo ebonakalayo yayo yonke imicimbi yakho
I-Hopin yindawo ebonakalayo enezindawo eziningi ezisebenzisanayo ezenzelwe ukuxhuma nokuzibandakanya. Izihambeli zingangena zingene nangaphandle kwamakamelo njengomcimbi obusebusweni futhi zijabulele okuqukethwe nokuxhumana obakhele kona.
IHopin yakhelwe ukuphindaphinda okwenzeka kumuntu uqobo, ngaphandle kwezithiyo zokuhamba, izindawo, isimo sezulu, ukuzulazula okungathandeki, ukupaka, njalonjalo. Nge-Hopin, amabhizinisi, imiphakathi, nezinhlangano zingafinyelela izethameli zazo zomhlaba wonke, zihlangane endaweni eyodwa, futhi zenze umcimbi omkhulu we-inthanethi uzizwe umncane futhi.
Izici zeHopin zifaka
Uhlelo Lomcimbi - kwenzakalani, nini, nokuthi iyiphi ingxenye okufanele ilandelwe.
reception - ikhasi lokwamukela noma indawo yokubamba iqhaza yomcimbi wakho. Lapha ungathola ngokushesha ukuthi kwenzekani emcimbini njengamanje.
Stage - kufika ku-100,000 ababekhona abangahambela izethulo zakho noma amagama asemqoka. Sakaza bukhoma, dlala okuqukethwe okurekhodwe ngaphambilini, noma usakaze nge-RTMP.
sessions - abafika kwabangu-20 bangaba kusikrini esisodwa namakhulu ababekhona ababukayo futhi baxoxe ngezikhathi ezingenamkhawulo ezingasebenza ngasikhathi sinye. Ilungele amarobhothi, amaphrojekthi, noma izingxoxo zeqembu.
Uhlu Lwezipikha - khuthaza ukuthi ubani okhuluma emcimbini.
Izingosi - amandla okuzenzela omuntu ngamunye okuzenzekelayo ukunika amandla ababekhona ababili, izipikha, noma abathengisi ukuthi babe nekholi yevidiyo.
Xoxa - Ingxoxo yomcimbi, ingxoxo yasesiteji, izingxoxo zeseshini, izingxoxo zamadokodo, izingxoxo zomhlangano, izingxoxo zasesiteji, nemiyalezo eqondile konke kufakiwe. Imiyalezo evela kubahleli ingaphinwa futhi igqanyiselwe ukukhonjwa okulula okuvela kwababekhona.
Amadokodo ombukiso - faka amadokodo abaxhasi nabalingani babalingani lapho abenzi bemicimbi bekwazi khona ukuhambahamba ukuhambela amadokodo abathandayo, ukuxhumana nabathengisi, nokuthatha isinyathelo. Idokodo ngalinye emcimbini wakho lingaqukatha ividiyo ebukhoma, okuqukethwe okunegama, izixhumanisi ze-Twitter, amavidiyo aqoshwe kusengaphambilini, okunikezwayo okukhethekile, abathengisi kwikhamera ebukhoma, nama-CTA enkinobho eyenziwe ngezifiso.
Amalogo abaxhasi - amalogo achofozekayo aletha izivakashi kumawebhusayithi abaxhasi bakho.
Ukuthengisa Amathikithi - Ukuhlanganiswa kwamathikithi nokuhlanganiswa kokukhokha nge-akhawunti yomthengisi weStripe.
Ama-URL afushane - nikeza ababekhona ukungena ngokuchofoza okukodwa kunoma iyiphi ingxenye yomcimbi eHopin.
IHopin iyipulatifomu yomcimbi wabo bonke eyenzelwe ukuxhumanisa izipikha zakho, abaxhasi, kanye nababekhona. Abahleli bangafeza izinhloso ezifanayo zemicimbi yabo engaxhunyiwe ku-inthanethi ngokwenza ngokwezifiso imicimbi yabo ye-Hopin ukuze ivumelane nezidingo, noma ngabe umcimbi wokuqasha abantu abangu-50, umhlangano wezandla zabantu abangu-500, noma ingqungquthela yaminyaka yonke yabantu abangu-50,000.
Thola iDemo yeHopin
Tags: ingxoxo yomcimbiumbukiso idokodohopinizingqungquthela eziku-inthanethiimicimbi e-intanethiuhlu lwezipikhaI-Stripeukuthengiswa kwamathikithiamakholi wevidiyoi-expo ebonakalayo
I-CSV Explorer: Sebenza ngamafayela amakhulu we-CSV